[12 / 12 / 2019] IMM na-eji wiil roba eme ihe omumu nke ndi mmadu	34 Istanbul
2019 / 372131 nke Turkish State Railways Directorate (TCDD) na oke mmachi nke 1.643.983,79 TL na TCDD 2.593.284,61 site na ọnụahịa ruru 7 TL. Xlọ ọrụ 8 nyefere ikike dị nro maka nro nke Rubber Coating on dịgasị iche iche na ọkwa dị na Mpaghara Mpaghara na MEHMET ŞERAFETTİN PEHLİVAN + ABBAS ÖZKAN meriri nro ahụ site na ọkpụkpọ 1.666.371,65 TL nyere dịka nsonaazụ ahụ edoghị anya. Xlọ ọrụ 4, bụ ndị keere aka na ntinye akwụkwọ ahụ, nyefere nnabata n'okpuru uru mmachi ahụ.
Mgbasa ozi, 2,3,4,5 na 7. Ọ gụnyere ọrụ nke 5119,96 Metretule Rubber mkpuchi na ọkwa dị iche iche na-agafe n'ọfịs District. Ogologo oge ọrụ a bụ ụbọchị ọrụ kalenda 450 (narị anọ na iri ise) site na ebe nnyefe.